I-EDP evuselelekayo izonikeza amandla avuselelekayo kwaNestlé e-US | Ukuvuselelwa Okuhlaza
UTomàs Bigordà | | Amandla omoya, Photovoltaic Solar Amandla, Amandla avuselelekayo
Ama-Portuguese EDP Renovables, inkampani ephethwe yi-EDP ne indlunkulu eSpain, umemezele inkontileka yeminyaka engu-15 yokuthenga nokuthengisa ugesi ovuselelekayo wezitshalo ezi-5 zeNestlé yamazwe ngamazwe.
Empeleni, izohlinzeka ngama-80% kagesi odingekayo ukuphakela izitshalo zawo ezinhlanu esifundazweni sasePennsylvania, e-United States.
2 Amanye amazwe amaningi azinikele kumandla avuselelekayo
2.1 I-Apple nepulazi layo lomoya
Isivumelwano sisho izitshalo zokukhiqiza futhi Izikhungo zokusabalalisa iqhutshwa yiNestlé Purina PetCare, iNestlé USA neNestlé Waters eNyakatho Melika emadolobheni ase-Allentown naseMechanicsburg (ePennsylvania).
Kubikwa ukuthi i-EDP Renovable izophakela ama-megawatts angama-50 Okwegesi. Isitatimende siveza nokuthi esikhathini esingaphansi konyaka "u-20% kagesi osetshenziswa uNestlé e-US uzovela emithonjeni evuselelekayo."
Ngaphezu kwalokho, uNestlé wagcizelela ukuthi inkontileka nenkampani yasePutukezi izovuma «Sika izindleko zamandla, gwema ukungaguquguquki kwentengo kaphethiloli ”futhi“ hlala uncintisana ”.
Ngokwamazwi omqondisi we-supply chain we-Nestlé United States, uKevin Petrie: «Ubumbano lwethu ne-EDP Renovables lusisiza ukuthi sithuthuke siye enhlosweni yethu yokufeza umthelela kwezemvelo null phakathi kwamanje kanye no-2030 futhi kungenza esinye isibonelo senqubo yokuguqulwa kwebhizinisi lethu ", kusho isitatimende isitatimende
Ngokunikezwa kwalesi sivumelwano, i-EDP Renovables izokwandisa umthamo wepulazi layo lomoya iMeadow Lake VI, eliseBenton County (Indiana), lapho inkampani yasePutukezi ingumholi ekukhiqizeni amandla omoya
Amanye amazwe amaningi azinikele kumandla avuselelekayo
INestlé akuyona ukuphela kwamazwe amakhulu amakhulu okuwukuthi ukubheja ezintweni ezivuselelekayoSingakhuluma futhi nge-Apple, Nike, Amazon, phakathi kwabanye.
I-Apple nepulazi layo lomoya
Iberdrola izonikezela ngamandla enkampanini yezobuchwepheshe i-Apple phakathi neminyaka engamashumi amabili ezayo, kunwetshwa okungaphezulu okungu-5, ngaleli paki elishiwo ngenhla. Uzotshala kuphi ubuncane bezigidi ezingama-300 yamadola.
Konke lokhu kutshalwa kwemali kuzodlula Inkampani ye-Avangrid, Inkampani ephehla ugesi ka-Iberdrola e-United States. Kumele kukhunjulwe ukuthi isigebenga i-Apple yezobuchwepheshe, iyinkampani enkulu kunazo zonke emhlabeni ngenani lemakethe yesitoko, ngenani lamanje elilinganiselwa ezigidini ezingama-880.000 zama-euro.
Inkontileka ifaka ukwakhiwa kwe- isitshalo samandla omoya eGilliam County (Oregon), ezoba nomthamo wamamegawathi angama-200 (MW), izoqala ukwakhiwa ngonyaka ozayo (2018) futhi izoqala ukusebenza ngonyaka wezi-2020. Ukutshalwa kwemali kokuqala kwepaki iMontague kufinyelela ku- AmaRandi ayizigidi ezingama-300 (ama-euro ayizigidi ezingama-275).
Ngesivumelwano esisayiniwe, u-Iberdrola no-Apple banakho usayine inkontileka yesikhathi eside yokuthengisa amandla, Ngakho-ke, inkampani kagesi eholwa u-Ignacio Sánchez-Galán izophatha, isebenze futhi igcine ipulazi lomoya. Ngenkathi i- kukhiqizwe amandla kagesi esakhiweni seminyaka engamashumi amabili ezayo sizonikezwa izakhiwo ze-Apple.
Faka nokuthi ipaki izotholakala eduze kwezinye izimpahla yenkampani ese-Oregon, ezosiza ekufezeni ukunciphisa izindleko (ukusebenzisana).
Ekupheleni konyaka odlule, inkampani ephethwe yi-Iberdrola yasayina isivumelwano seqhinga lesikhathi eside nomkhiqizi wezingubo zemidlalo wase-US uNike. Ngokwesivumelwano, i-Avangrid izonikeza amandla omoya enkampanini yaseMelika ngesikhathi leminyakeni eyishumi elandelayo.
Amandla azofinyelela ku- «indlunkulu » kusuka eNike eBreaverton, e-Oregon, kusuka emapaki eLeaning Juniper TT, atholakala nase-Oregon, naseJupiter Canyon, eWashington.
Amandla atholwe yiNike afinyelela kumamegawathi (MW) angama-70, uma kuqhathaniswa ne I-350 MW yazo zombili izitshalo ezinayo.
Njengoba kuchazwe ngabakwaNike, lesi sivumelwano saqala ngoJanuwari odlule, futhi siyingxenye yokuzibophezela kwenkampani ekufezeni ukuthengwa okuvuselelekayo ngamaphesenti ayikhulu ezikhungweni zayo ngo-2025.
Ngaphezu kwalokho, i-Iberdrola (Avangrid) ihlinzeka ngamandla womoya ku- e-commerce i-Amazon enkulu, nge-Amazon Wind Farm e-US East, ipaki eseNorth Carolina, esivele isebenza.
Zonke lezi zivumelwano zigcizelela inhloso yezizwe ngezizwe zase-US ukuqhubeka nokukhuthaza amandla aluhlaza, yize kuye kwaxegiswa imithethonqubo. izinqubomgomo zezemvelo ezethulwe ngumongameli omusha waseMelika, UDonald Trump, ngokungafani nezinqubomgomo zomanduleli wakhe, uBarack Obama.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Ukuvuselelwa kwe-EDP kuzohlinzeka ngamandla avuselelekayo kuNestlé e-US
Indatshana enhle kakhulu, halala 🙂